Ọrụ nke Global Positioning System (GPS) | Singapore Top Mini GPS Personal Tracker maka Autism / Autistic Kids & Dementia okenye
GPS okwu mkpirisi nochiri anya Global Positioning System - asughari: Global Positioning Sistemụ. Aha onye isi (ogologo) aha ya bụ Ngagharị Satellite na Ranging - Global Positioning System, ma ọ bụ GPS nke NAVSTAR dị mkpụmkpụ.
Eziokwu kachasị mkpa:
- Ngalaba Nchebe US bụ ndị mepụtara teknụzụ kemgbe 1970s.
-GPS tinyere ọrụ na 17.07.1995.
-Porocessor: NNSS (Sistemụ Igwe Igwe Igwe Na-ebugharị Navy) nke Ndị Navy US, mechara gaa “Nzipu”
Ndị ọzọ GPS: Sistem satịlaịtị ụwa niile sitere na Russia, China, na Europe
-GLONASS bụ netwọkụ satịlaịtị Russia (na-arụ ọrụ).
-Beidou bụ aha sistemụ satịlaịtị ndị China (n'okpuru mmepe).
-Galileo bụ aha nke sistemụ satịlaịtị EU nke ebidola na Disemba 2016.
A GPS tracker, colloquially kwa GPS nsuso ngwaọrụ ma ọ bụ nnyefe GPS akpọrọ na-agwa gị na naanị otu aka, ebe GPS ọnọdụ sistemụ, ya mere mmadụ ma ọ bụ ọbụna ụgbọ. Ma olee otú GPS nsochi na-arụ ọrụ? Kedu ihe m chọrọ maka nke a? Nke a gbagwojuru anya? Achọrọ m ngwanrọ ọ bụla maka nke ahụ? Anyị na-akọwara gị ya n'ụzọ ga - emechaa, ị nwere ike ịchọta ụgbọala ma ọ bụ ndị mmadụ.
Iji ghọta ihe kpatara GPS Tracker ji bụrụ ụdị ọrụ dịgasị iche na nke bara uru, ị ga-amata otu esi arụ ọrụ. Nke mbu, achọrọ ihe mgbaama akpọ GPS, nke ezigara. Ugbu a, e nwere ụzọ abụọ ebe nkwukọrịta ga-esi mee: ma ọ bụrụ na ọ nwere satịlaịtị ma ọ bụ kaadị SIM.
Gịnị bụ GPS Tracker?
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, GPS Tracker bụ obere ekwentị, naanị na-enweghị ihe ngosi na enweghị keyboard. Ọzọkwa, a ka nwere obere mgbaaka GPS na tracker, dịka enwere ike ịnwe otu na ekwentị gị. Imirikiti ndị traaja GPS a ka dị obere, ọtụtụ mgbe ọ bụ ogo nke igbe ọkpọ.
Kedu ka ọnọdụ ahụ si ruo m?
Dị mfe. First ga-ebu ụzọ SIM kaadị, mana obere kaadi akwugoro ezuola. Ọ bụrụ n’ikpebeghi na kaadi SIM ma ọ bụ ịchọ ka i lee kaadị SIM a dabara adaba. GPS Tracker na-eji GPS mgbawa dị na ngwaọrụ ahụ iji chọpụta ọnọdụ ya wee zigara ya na Portal GPS GPS anyị efu. Emere nke a site na netwọ ekwentị ekwentị. Na GPS nsochi anyị, a na-echekwa data a wee ị ga - ahụ ihe na - ebunye GPS na maapụ. Ọ bụrụ na ịchọghị iji sava GPS dịka nke anyị, ị nwekwara ike ịkpọ ngwaọrụ ahụ ma ọ bụ zite ya SMS ọ ga-aza gị site na SMS na njikọ Google Maps. N’ezie, ngwanrọ GPS anyị enwere ntụsara ahụ ebe a karịa ịnwe izipu SMS oge ọ bụla, n’ihi na ọ bụrụ na ị na-eji ọnụ ahịa nsuso anyị, mkparịta ụka na-aga n'ihu na onye na-ebugharị GPS ga-akpaghị aka. Ikwesighi ime ihe ọ bụla karịa ịbanye na aha njirimara gị na Portal gị ma ị ga-ahụrịrị ọnọdụ nke ụgbọ ahụ ma ọ bụ onye ahụ.
Kedụ ka sava GPS / sapaal portal na-arụ ọrụ?
GPS Tracker gị nwere ike zitere gị ọnọdụ ahụ site na SMS ma ọ bụ jiri aka na akpaghị aka site na ekwentị mkpanaaka gaa na sava GPS anyị. Anyị GPS nsochi Portal na-enweta data a, nyochaa ya ma chekwaa data a na nchekwa data. Mana Gị dịka onye ọrụ, onweghị ihe ị ga-eme na ụdị ọrụ ọrụ nka niile maka na ị na-emepe ọnụ ụzọ ebe, tinye aha njirimara na paswọọdụ gị wee nwee ọnọdụ dị na ihuenyo kọmputa gị, mbadamba ihe gị ma ọ bụ ama.
A na-akpọ Portal nsochi oghere ọ bụghị naanị maka ndị mmadụ kamakwa maka nsuso anụmanụ ma ọ bụ nsuso ụgbọ. Site na ụdị ntanetị dị n'ịntanetị, onye ọrụ ahụ nwere ọtụtụ uru n'otu oge. Enwere ike ịtụle data dịkarịsịrị, yana ọnọdụ ugbu a na GPS tracker. Ọtụtụ mgbe, a na-enweta ọtụtụ akụkọ na arụmọrụ ndị na-enye ohere ịlele ụzọ kachasị mma na nke ziri ezi. N'otu ụzọ ahụ, ekpughere ozi banyere ndụ ọrụ na oge njem. Mgbe ahapụghị mpaghara mpaghara, agbanyụọ oti mkpu. Achịkọtara data anakọtara na ọnụ ụzọ dị otu a. Na Portal, enwere ike ịhazi tracker, nke na-arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ. Iji jikwaa ọrụ a, a ga-eji mmemme kwesịrị ekwesị.
GPS Tracker: Ha adabara maka nke ahụ
Nke mbu, ejiri ndi GPS nnata iji gosi onye ọrụ. Dịka ọmụmaatụ n'ụdị ngwa map maka ama. A na-eji ngwa ụfọdụ kachasị maka ebumnuche ụfọdụ, dị ka ịnya igwe ma ọ bụ ịga njem.
Ebumnuche ọzọ bụ mkpebi nke ihe ma ọ bụ anụ ụlọ. A na-eji ihe mbụ a na-enwewanye omume ntụrụndụ “Geocaching”, ụdị akụ achọrọ site na GPS. Ihe nke abụọ nwere ike ịmasị bụ ndị nwere nkịta na-enwe mmasị iso ezigbo enyi ha gaa njem n'èzí, ebe ana-ahapụ ya ịhapụ imefu ya mgbe ụfọdụ. Site na olu nkịta GPS, onye nwe ya nwere ike ịchọta nkịta ya n'oge ọ bụla, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ hụghị ya na aha ọma.
Enwere ike tụọ ọsọ ahụ site na ịchọta ọnọdụ nke ihe n'otu oge abụọ na tụọ anya ya n'etiti oge abụọ ahụ. Emere nke a site na ngwaọrụ ndị na-anyagharị ụgbọ ala, nke na-egosikwa gị ọsọ ọsọ gị n'ime ọtụtụ kilomita kwa elekere na ngosipụta. Na mkpokọta, ka satietị ma ọ bụ redio karịa, ka ị na-elele ọnọdụ gị.
A na-akpọkarị GPS Tracker dị ka onye na-achọ ụzọ, ngwaọrụ nsuso, beagle ma ọ bụ dịka ọchọ ihe. Ọbụghị sọsọ ọsọ ọsọ gị ka ị na-agba mpụ ma na-agba ọsọ ma ọ bụ na -elegharị anya nwere ike ịdekọ akwụkwọ nke ọma ma wughachi ya, mana ngwaọrụ dị ọtụtụ karịa. Enwere otutu ebe enwere ike melite nchekwa izugbe site na nlekota GPS. Iji maa atụ, ọ bụrụ na nne na nna na-enwe nchegbu na ụmụ ha erutela ụlọ akwụkwọ nke ọma, a na-atụkarị GPS Tracker ike. N'ezie, nke a metụtara ụzọ ụlọ. N'oge ihe mberede, enwere ike ịchọta ndị nwere ọrịa ụsọ ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ na ọghọm bịara ma ọ bụ kpọọ maka enyemaka na ezumike ma ọ bụ njem dị mkpa, akụrụngwa na-enye nchekwa ahụ. Maka ụgbọ ala, ọgba tum tum, anyịnya igwe na ụgbọ ala ndị ọzọ, nke a na-ebute nchedo ohi zuru oke. Ọzọkwa, enwere ike ịchọta ngwongwo ma ọ bụ ihe ndị ọzọ bara uru ngwa ngwa site na ihe nlere GPS na nlekota GPS.
Nzuzo 5425 1 Echiche Taa
Atụmatụ na Ọrụ nke SPY Zoro Ejiri Magnet GPS…